Rohany MK-2866 (841205-47-8) mpamokatra sy mpamatsy - Factory
SKU: 841205-47-8 Sokajy: Serasera Sarmana
Vary mena (2866-841205-47) volo MK-8
Rohan'ny MK-2866 (841205-47-8) Famaritana
Ny roja MK-2866 roja, fantatra ihany koa amin'ny Ostarine na Enobosarm, dia ao anatin'ny kilasy misy ny fanafody antsoina hoe SARMS, izay mpikirakira ny sela mpanodina sela androgen amin'ny Ki ao 3.8 nM, ary dia mifototra amin'ny sela anabolika. Ny poofa MK-2866 vita amin'ny MK-2866 dia natao mba hiasa toy ny testosteron, izay mampiroborobo sy / na mihazona ny libido, ny fahavokarana, ny fitomboan'ny prostate, ary ny fitomboan'ny hozatra sy ny hery. Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina toy ny atrophy sy ny osteoporose. Ary ny poofa RK MK-12 dia nampiasain'ireo atleta hanampy amin'ny fampiofanana sy hampitombo ny fahasalamana ara-batana sy ara-batana. Ny lehilahy sy ny zokiolona zokiolona izay nitondra diplaoma maotina amin'ny Ostarine nandritra ny herinandro 3 dia nitombo ny fihenan'ny muscle XNUMX ary namoy tavy mena, tsy misy fiovana amin'ny sakafo na fanatanjahan-tena.
Roda MK-2866 roahina (841205-47-8) Specifications
Product Name Raw MK-2866 vovoka
Anarana simika Ny roapolo MK-2866 (GTx-024), Ostarine, MK 2866, S-22, ENOBOSARM, (S) -N- (4-Cyano-3- (trifluoromethyl) phenyl) -3- (4-cyanophenoxy) -2 -hydroxy-2-methylpropanamide, HMS3654E16, BCP02391, CS-0562, DB12078, O3571H3R8N, AC-30221, AJ-92121, (S) -Ostarine, GTx 024, (2S) -3- (4-Cyanophenoxy) (4-cyano-3- (trifluoromethyl) phenyl) -2-hydroxy-2-methylpropanamide
Drug Class Aromatics; Intermediates; Pharmaceuticals; Hormonina Drugs; SARMs (Modulator mpikirakira tsindrona androgen); inhibitors
molekiolan'ny Formula C19H14F3N3O3
molekiolan'ny Wvalo 389.3279696
mitsonika Point 132 hatramin'ny 136 ° C (270 hatramin'ny 277 ° F)
Ny antsasaky ny biolojia 24 ora
Color A solid crystalline
Solubility 25 ° C) * In vitro DMSO 78 mg / mL (200.34 mM); Ethanol78 mg / mL (200.34 mM); Rano <1 mg / mL (<1 mM); In vivo 1% DMSO + 30% glycol polyethylene + 1% Tween 805 mg / mL
Storage Temperature 3 taona amin'ny -20 ° C
Roda MK-2866 roapolo Application Ny kapila MK-2866 roja MK-XNUMX Capsules / takelaka Ostarine ho an'ny fanorenana bodyguild, famonoana, fanavaozana sns.
Mela-roanjom-bary MK-2866 (841205-47-8) Description
Misy tombony marobe amin'ny fampiasana MK2866. Amin'ny ankapobeny dia fitambarana tena lehibe izay afaka manampy anao amin'ny fomba maro. Ho hitanao fa ny olona dia mampiasa MK2866 amin'ny famoahana, famonoana ary famerenana. Izany no mahatonga an'i Osta ho lehibe, afaka mampiasa izany ho an'ny tanjona rehetra ianao. Na oviana na oviana no manapaka ny tavy na ny hozatra, Ostamuscle dia safidy tsara ho an'ny roa amin'izy ireo.
Ny MK-2866 dia vodin-tsarimihetsika malaza amin'ny androm-pifidianana (SARM), ampiasaina amin'ny atleta sy ny fambolena, mba hampitombo ny hery sy ny haben'ny hareza.
Ny moka MK2866 dia afaka mamporisika ireo receptors androgen, ireo receptors steroideo steroids, ary koa ny mimicking testosterone.
Ny voka-dratsin'ity SARM ity dia voafetra ihany, satria mikendry taratra manokana amin'ny vatany izy. Anisan'izany ny taolana sy ny hozany. Midika izany fa amin'ny fandraisana ny SARM, tsy voatery hanahy momba ny fihenan'ny estrogen na ny fanafoanana ny testosteron.
Ny vovo-tsolobe MK2866 dia manome vokatra tsara ary fantatra tsara amin'ny fanatsarana ny endriny sy ny fampiroboroboana ny atleta sy ny mpanao biriky. Miorina amin'ny asany izany, azo antoka kokoa noho ny steroids sy SARM hafa, na dia mbola ankatoavina ho an'ny olona aza izy io.
Ny MK2866 dia novolavolaina manokana mba hanaisotra ny aretin'ny hozatra, ary hisoroka ny fahabangana amin'ny hozatra, saingy mbola eo ambanin'ny fikaroham-pahasalamana izy ireo hanamafisana izany.
Rohila MK-2866 roahina (841205-47-8) Mekanisma amin'ny asa
Ny hetsiky ny hormones ho an'ny lehilahy fantatra amin'ny anarana hoe androgens dia mihoatra noho ny fananganana hozatra na fampitomboana ny volavolan-damosin'ny vatana. Raha misy steroïde ampiasaina mba hamporisihana ireo tsimokaretina natao ho an'ny androgen, dia mety hisy fiantraikany hafa miaraka aminy.
Ny SARM dia mifantoka amin'ny sehatra manokana amin'ny vatana toy ny hozatra, ary manampy amin'ny fampitomboana ny fomba anabolika tsy misy fiantraikany amin'ny taovam-pananahana. Ny rafitry ny MK2866 dia manome tombontsoa vitsivitsy amin'ireo SARM hafa voajanahary, ary mbola mitohy ny fikarohana momba ny zava-mahadomelina vaovao sy mahomby kokoa ho an'ny fanorenana.
Rehefa nosedraina tamin'ny bibikely antsoina hoe totozy ny MK2866, dia tena mahomby toy ny dihydrotestosterone sy androgen, mba hamerenany ny hafetsen'ny vozona ao amin'ny rihana ambanin'ny tany izay manankarena AR (androgen receptors). Io SARM io dia afaka mampihetsika sela avy amin'ny sela izay manampy amin'ny famerenana ny hozatra sy ny fanavaozana.
Miaraka amin'ny MK2866, ny sela ao amin'ny vatanao mifandray dia azo atahorana ho sitrana haingana amin'ny hozatra. Ankoatra izany, ny tsindrona amin'ny Ostabolic dia mety hitarika amin'ny tanjaka sy ny fitomboan'ny hozatra amin'ny fampitomboana ny asan'ny IGF-1 (ny gnome-tovolahy 1).
soa ny Rohan MK-2866 Rohina (841205-47-8)
Raha manana sakafo mahasalama amin'ny fampiasana routine ianao, dia mety hahatratra hatramin'ny 11lbs. ny masin'ny leo, na dia mety hiankina miankina amin'ny olona aza izany. Ny olona sasany dia mahazo tombony amin'ny 15lbs. na ambany ny 5lbs. fa ny andian-tafahoatra dia 6-8lbs.
◆ Fanasitranana hozatra / taolana
Ny MK2866 dia manome fitsaboana haingana amin'ny aretim-pisefoana sy ny fanasitranana ny taolana na dia kely aza. Manome tanjaka marina ho an'ireo mpanao biriky sy atleta izany, mba hahafahany mamelatra ny fahaiza-manaony araka ny tokony ho izy rehefa mandray anjara amin'ny hetsi-pitenenana toy ny fametahana labiera sy ny mpikiky.
Ny fatiantoka hozatra dia fihenam-bidy lehibe amin'ny famahana ny cycles ho an'ny mpanao biriky. Ny fifehezana ny MK2866 dia manakana ny fihenan'ny hozatra raha mandoro ny tavy. Ity no tena ilain'ny bodybuilders indrindra amin'ny MK2866.
◆ Fo ara-pahasalamana
MK2866 dia manan-danja ho an'ny olona mijaly amin'ny aretim-po na aretina mifandray. Ireo olona ireo matetika dia mihena ny fatiantoka mavesatra sy ny hozatra.
Ny tombontsoa hafa dia:
Mampitombo ny fiaretana amin'ny fampitraka izany ary mampitombo hery koa
Manana fiantraikany anabolika ambony eo amin'ny vatana
Manana herim-po maharitra ho an'ny fiofanana
Manampy amin'ny fandoroana kaloria misimisy kokoa noho ny lany
Mampitombo ny fihazonana azota ao amin'ny vatana.
MK-2866 vovoka (841205-47-8) roapolo Recommended
Ny 15-25mg doka an'ny MK2866 dia asaina ho an'ny lehilahy amin'ny fotoana fanarenana mandritra ny herinandro 8-12. Tokony horaisina eo amin'ny 30-40min mialoha ny fiatoana sy ny sakafo. Io dosage io ihany koa dia asaina ho an'ny lehilahy ao amin'ny dingana feno.
Ny 5-10mg dosage an'ny MK-2866 dia atolotra ho an'ny vehivavy, mba hakana 30-40 minitra alohan'ny handehanana sy ny sakafo. Tokony ho amin'ny herinandro faran'ny herinandro 6-8 izany.
MK-2866 dia manana ny antsasaky ny andavanandro amin'ny ora 24, ka tsy ilaina ny mizara ny dosinao.
Side effects ny Rohan MK-2866 Rohina (841205-47-8)
Ireo SARM toy ny Ostarine dia tsy misy fiantraikany amin'ny mpitsabo rehetra ao amin'ny vatana. Noho izany, ny fiantraikan-tsainy dia tsy mafy toy ny an'ny steroïde.
Ny voka-dratsin'ny voka-dratsiny rehefa tafiditra ao anatin'izany fiaraha-miasa mahery vaika izany dia ahitana:
▲ Fanavakavahana kely amin'ny famokarana testosterone amin'ny dosie ambony an'ny MK2866.
▲ Ny aretin-koditra mampihetsi-po dia niaina olona vitsivitsy noho ny fitomboan'ny rà odiody. Izany dia mitranga amin'ny mpampiasa mahasarika ny estrogen.
▲ Izany dia miteraka aretina sy fanaintainana eo amin'ny mpampiasa vaovao.
▲ Ireo mpampiasa sasany dia mety mahatsapa ny fahasarotana amin'ny fitrandrahana, ny fahasosorana, ny tanjaka, ny fanaintainan'ny fiarahamonina, ary ny fiovana amin'ny hoditra noho ny dosie ambony an'ny MK2866.
Testosterone: Action, Deficiency, Substitution, natontan'i Eberhard NJeschlag, Hermann M. Behre, Susan Njeschlag, pejy 459-474.
Estrogen Action-Selective Estrogen Receptor Modulators, ary fahasalaman'ny vehivavy, Nataon'i V. Craig Jordan, pejy 418-421.
1 famerenana for Raw MK-2866 roja (841205-47-8)
Nahazo ny vovobony MK-2866 mba hitsapana, ny vokatra azo avy amin'ny test dia tena avo lenta sy fahamendrehana!